Alatsinainy, 6 Jona, 2011 Alarobia, Oktobra 16, 2013 Jenn Lisak Golding
Nandritra ny taon-dasa dia nisy ny fanontanina isan-karazany sy ny valiny hita manerana ny Internet, anisan'izany Quora, Opinionaided, ary Valiny LinkedIn. Ny foto-kevitry ny Q&A dia tsy vaovao, fa ny fampiharana kosa dia nifindra tamin'ny lohahevitra ankapobeny ho amin'ny fampiharana raharaham-barotra. Ireo mpilalao voalohany amin'ity sehatra ity, Answers.com, Ask.com, Quora, sns., dia nampiasaina tamin'ny fanontaniana ankapobeny toy ny hoe "Inona no mety ho fandresena amin'ny loteria?" ary tsy nifantoka tamin'ny fifaneraserana ara-tsosialy. Ireo interface vaovao, na izany aza, dia niova ho toerana tsy hahazoana loharanom-baovao fotsiny, fa manao fifandraisana ara-tsosialy manan-danja ary hianatra bebe kokoa momba ny fomba indostria amin'ny ankapobeny.
Amin'ny ankapobeny, ny serivisy Q&A dia niova tamin'ny fomba lehibe telo:
1. Mpiorina ara-tsosialy
Tsy toy ny tranokala Q&A teo aloha, ireo rindranasa vaovao dia mamela ny mpampiasa hifandray amin'ireo namany, ary koa ireo olona tsy dia fantany akory, fa maniry azy ireo. Ohatra, hitako ny fanontaniana avy amin'ny olona izay tsy arako ao amin'i Quora izay nandefa fanontaniana tamin'ny lohahevitra arahiko. Ny singa ara-tsosialy dia nametraka valinteny ara-pihetseham-po bebe kokoa ho an'ny olona satria mamela azy ireo hifanerasera amin'ny hafa, fa tsy hiandry valiny fotsiny. Toa matoky bebe kokoa ny valiny amin'ireo tranonkala ireo ny olona satria azontsika atao ny mampifandray ireo valiny ireo amin'ny tarehy sy anarana.
2. Sokajy sy lohahevitra
Mahagaga ahy tanteraka ny fahafahan'ny fikarohana ao amin'ireto tranonkala rehetra ireto, ary koa ireo sokajy sy lohahevitra voasivana. Na dia misy lohahevitra taonina aza ao amin'ireto tranonkala ireto hisafidianana, ny sakafonao dia azo ampifanarahana amin'ireo lohahevitra tianao ho fantatra bebe kokoa.
3. Ny fisokafana sy ny fikarohana
Tsy ny olona ihany no mamaly fanontaniana lehibe, fa manolotra vaovao izay tsy ho nomena akory na dia folo taona lasa aza. Tian'ireo olona ny mamaly fanontaniana ary tiany ny manome lanja. Na dia tsy mavitrika amin'ireo tranokala ireo aza ianao dia azonao atao ny mikaroka izay ataon'ny indostria, izay lazain'ny fifaninanana ary ny fomba fahitana azy eo amin'ny tsena.
Raha tsy eo ianao amin'ireto tambajotra ireto dia eritrereto izany ary atsy ho atsy.
Tags: fanoratana bokyindostria ara-bolaongagepasspages
Twerrific! Button Hanaraka Twitter